के गर्ने जब तपाईंको आईफोनले वाइफाइसँग जडान गर्दैन आईफोन समाचार
आज यो Wi-Fi को बिना जीवन कल्पना गर्न गाह्रो छ। आजकल हामी सबै कुरा हाम्रो परिचितहरूसँग सम्पर्कमा बिताउँदछौं र वेब पृष्ठहरूसँग परामर्श गर्दछौं जुन आफैलाई सबै कुराको जानकारी गराउँदछ। यसैले वाइफाइ जडान हाम्रो जीवनको एक महत्वपूर्ण हिस्सा भएको छ। तर के हुन्छ जब हामी हाम्रो आईफोन, आईपड टच वा आईप्याडसँग जडान गर्न सक्दैनौं? थोरै मा, हामी रिसाउँछौं। यसमा पोस्ट हामी तपाईंलाई सिकाउनेछौं के गर्ने जब आईफोन वाइफाइसँग जडान हुँदैन यसैले मनपर्दछयद्यपि धेरै जसो केसहरूमा यो उनीहरूको गल्ती हुँदैन।
धेरै जसो केसहरूमा समस्याको सजिलो समाधान हुन्छ, त्यसैले तपाईको रिसलाई गुमाउनु उचित हुँदैन। तलका सुझावहरूको केहि केहि धेरै आधारभूत हुनेछ, तर हामी ती सबै समावेश गर्दछौं सबै सम्भावनाहरूको मूल्या assess्कन गर्नुहोस्। तपाईंसँग तल सबै सुझावहरू छन्।
1 के तपाईं संकेतको दायरा भित्र हुनुहुन्छ?
2 के Wi-Fi अन छ?
3 के तपाईंको वाइफाइ नेटवर्क सेटिंग्समा सूचीबद्ध छ?
4 सबै केबलहरू जाँच गर्नुहोस्
5 सबै रिसेट गर्नुहोस्
के तपाईं संकेतको दायरा भित्र हुनुहुन्छ?
हामीले पहिले नै भनिसक्यौं, वाइफाइ पहिले नै हाम्रो जीवनको भाग हो, तर म त्यो धेरै भन्छु routers तिनीहरू अझै प्रयोग गर्छन् पुरानो टेक्नोलोजी। मँ भन्छु "अप्रचलित" किनकि यसले हाम्रो सेवा गर्दैन। उदाहरण को लागी, यदि हामी एक प्रयोग गर्छौं राउटर त्यो एकल पर्खाल बीचमा जडान हुँदैन, यसले हाम्रो सेवा गर्दैन र हामी भन्न सक्छौं यो राउटर अप्रचलित हो।
संकेत राम्रो छ कि छैन भनेर जान्नको लागि केवल माथि बायाँ तिर हेर्नुहोस्, जहाँ तपाईं हेडर छविमा भएको जस्तो आइकन देख्न सक्नुहुनेछ। म भन्दछु कि यदि तपाईं केवल एक रेखा चिह्नित गर्नुहुन्छ भने हामी पक्का हुन सक्दैनौं कि हामी Wi-Fi जडानको दायरा भित्र छौं। दोस्रो लाइन बाटहो, हामी सोच्न सक्छौं कि हामी पहुँच भित्र छौं। यो पनि उल्लेख गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यदि हामीले वाइफाइ आइकन देख्दैनौं र हामीले 3G जी, G जी वा एलटीई देख्छौं भने हामी हाम्रो वायरलेस नेटवर्कमा जडित छैनौं, तर हाम्रो मोबाइल डाटा योजनामा।
के Wi-Fi अन छ?
कहिलेकाँही हामी वाइफाइ असक्षम गर्छौं र यसको एउटा कारण ब्याट्री बचत गर्नु हो। तार्किक रूपमा, यदि हामीसँग वाइफाइ विच्छेदन छ भने हामी यससँग जडान गर्न सक्षम हुने छैनौं। हामीसँग यो जडित छ कि छैन भनेर जाँच गर्न केवल माथि उठाउनुहोस् नियन्त्रण केन्द्र र हेरौं कि यो सेतो पृष्ठभूमि संग छ कि छैन।
आईफोन s एस वा आईफोन s एस प्लसमा आईओएस .6 ..6 वा पछि हामी इशारा गर्न सक्छौं 3D टच सेटिंग्स अनुप्रयोग आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र वाई-फाई चयन गर्नुहोस्, जसले हामीलाई यसको सेक्सन द्रुत पहुँच गर्न मद्दत गर्दछ र हामी पहुँच गर्न चाहन्छौं भन्ने नेटवर्कमा जडित छौं कि छैन भनेर हेर्नुहोस्। आज अवस्थित वायरलेस नेटवर्कहरूको मात्राको साथ, हामी जहिले पनि नेटवर्कमा जडान गर्न सक्दछौं जसको जडान "खुला" छ, तर हामीलाई पासवर्ड चाहिन्छ (जस्तै ओनो वाइफाइ)।
के तपाईंको वाइफाइ नेटवर्क सेटिंग्समा सूचीबद्ध छ?
यदि आईफोन, आईपड टच, वा आईप्याड नेटवर्क को नाम देख्न सक्दैनन्, समस्या पहिले नै हुनु पर्छ राउटर। जाँच गर्न को लागी तपाईं नेटवर्क हेर्न सक्नु हुन्छ हामी पहुँच गर्न को लागी सेटिंग्स / वाइफाइ (वा थ्रीडी टच गेस्चर र वाई-फाई चयन गर्नुहोस्) र हामी कनेक्ट गर्न को लागी नेटवर्क को नाम देख्यौं कि छैन हेर्नुहोस्। यदि यो देखा पर्दैन भने, यस्तो हुन सक्छ कि कुनै कारणका लागि, त्यहाँ संकेतमा काटिएको थियो। यो बग मध्ये एक हो जुन हामी कमसेकम हेर्न चाहन्छौं, तर यो आफै आफैं सुल्झिन्छ फेरि सुरु गर्दै राउटर.
अर्कोतर्फ, यदि त्यहाँ हामीमध्ये धेरैले एकै नेटवर्कमा जडान गरेका छौं भने, त्यहाँ सधैं सम्भव हुन्छ कि कसैले यसको कन्फिगरेसनमा परिवर्तन गर्यो। यदि कसैले बनाएको छ भने राउटर तपाइँको SSID प्रसारण नगर्नुहोस् (तपाईंको नाम) हामी तपाईंको नेटवर्कको नाम देख्ने छैनौं। सामान्य कुरा यो हो कि यदि हामी पहिले नै जडान भएका थियौं भने हामीले पहिले नै सेटिंग्स बचत गर्यौं, तर यसले जडान गुमाउन सक्छ र हामीले पुन: जडान गर्नुपर्दछ। यदि यो मामला हो भने हामीले पहुँच गर्नुपर्नेछ सेटिंग्स / वाइफाइ / अन्य र तपाईंको नाम (अपर र लोवर केस), सुरक्षा प्रकार र पासवर्ड थप्नुहोस्।
सबै केबलहरू जाँच गर्नुहोस्
हामी गलत हुन सक्दछौं यदि हामीलाई लाग्छ कि सबै कुरा ठीक छ किनकि सबै सेटि settingsहरू ठिक छन्। हार्डवेयरले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यो सम्भव छ कि हाम्रो आईफोन, आईपड टच वा आईप्याड कनेक्ट भएको छ राउटर सही रूपमा र हामी अझै इन्टरनेट पहुँच गर्न सक्दैन किनभने राउटर ईन्टरनेटमा जोडिएको छैन। यो हुन सक्छ यदि राउटर यो एक इलेक्ट्रिकल आउटलेटमा प्लग गरिएको छ, तर यसको नेटवर्क केबल यसको सम्बन्धित पोर्टबाट बाहिर तानिएको छ वा जडान अस्थायी रूपमा ड्रप गरिएको छ। यी अवस्थाहरूमा, यो उत्तम हुन्छ:
सबै केबलहरू जाँच गर्नुहोस्।
जाँच गर्नुहोस् कि यदि हामी अन्य उपकरणहरूको साथ इन्टरनेट पहुँच गर्न सक्दछौं।
यदि हामीसँग सबै केबुलहरू राम्रो छन् र हामी कुनै उपकरणको साथ जडान गर्न सक्दैनौं, यस्तो सम्भावना छ कि हाम्रो अपरेटरले त्यस समयमा हामीलाई इन्टरनेट प्रस्ताव गर्दैन। धैर्य गर्नुहोस् वा अर्को पोइन्टले भने अनुसार गर्नुहोस्।
सबै रिसेट गर्नुहोस्
यदि सबै कुरा ठीक जस्तो देखिन्छ र काम गर्न सक्दछ भने, हामी सधैं प्रयास गर्न सक्दछौं सबै रिसेट गर्नुहोस्, rबाह्य, आईफोन र नेटवर्कमा जडित कुनै पनि अन्य उपकरणले समस्या उत्पन्न गर्न सक्दछ।
अर्कोतर्फ, यदि समस्या केवल हाम्रो आईफोन, आईपड टच वा आईप्याडमा रहिरहन्छ, हामी पनि सक्दछौं नेटवर्क सेटिंग्स रिसेट गर्नुहोस् बाट सेटिंग्स / सामान्य / रीसेट सुरुबाट सबै सुरू गर्न। यदि हामी यो गर्छौं, हामीले सबै Wi-Fi नेटवर्कहरूको लागि डाटा पुन: प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ, तर यदि हामीले अन्तमा जडान गर्न सक्दछौं भने यो लायक हुन सक्दछ।
के तपाइँसँग तपाइँको वाइफाइ जडानको साथ समस्या छ र तपाइँ यसलाई हल गर्न को लागी व्यवस्थित गर्नुभयो? टिप्पणीहरूमा तपाइँको अनुभव छोड्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » के गर्ने जब तपाईंको आईफोन वाइ-फाइसँग कनेक्ट हुँदैन
किनकि मैले मेरो आईफोन s हरूलाई आईओएस updated मा अपडेट गर्‍यो, वाइफाइ र ब्लुटुथ कनेक्ट नहुँदा तिनीहरू ग्रे हो, मैले पुनःस्टार्ट गर्ने, पुन: भण्डारण गर्ने आदि गरेकी छु र अझै पनी समस्याहरू छन्।
यदि तपाईको आईफोनमा तपाईलाई यो समस्या छ भने, स्थिति अब सफ्टवेयर मध्ये एक होइन तर हार्डवेयरको हो। अंश बदल्न आवश्यक छ।
यदि त्यहाँ कुनै अन्य समाधान छैन भने मैले यसलाई राख्नुपर्नेछ, जवाफको लागि धन्यवाद
मलाई लाग्दैन कि समस्या हार्डवेयर हो, मलाई पनि त्यस्तै भयो किनकि मैले आईओएस updated ..9.3.1.१ अपडेट गरेकोले म वाइफाइमा जडान गर्न सक्दिन। त्यहाँ आइओएसको साथ समस्या छ।
ठ्याक्कै अध्यावधिक भएको बेलामा म उत्तम हुनु भन्दा अघि तर म आईओएस संस्करण डाउनलोड गर्न सक्दिन
जायरो एम सी भन्यो
म तपाईंलाई केही सल्लाह दिन्छु म onces को साथ एक पटक भयो जुन मैले भयो र मैले त्यसलाई हल गरें! एकसाथ होम र लक बटन थिच्ने प्रयास गर्नुहोस् र जब यो पुनः सुरु हुन्छ, स्याउ देखा पर्छ, लक देखा पर्छ, र यो बटन नबढुन्जेल थिच्नुहोस् होम बटन थिच्नुहोस्! यदि यो समाधान भएन PS !! एक ब्ल्यायर पत्ता लगाउनुहोस् र लक बटन मार्फत ब्लोअर राखेर उपकरणलाई तातो गर्नुहोस् जबसम्म यो बताउँदैन कि तापमान धेरै उच्च छ भने यो निश्चित हुनेछ।
Jairo Mc लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले हेयर ड्रायरको प्रयास गरेको छु र सत्य यो हो कि जादू द्वारा अब वाई-फाई र ब्लुटुथ काम गर्दछ, म आशा गर्दछु यो लामो छ, धेरै धेरै धन्यवाद
मैले आईफोन on मा आईओएस .9.3.1 ..6.१ मा अपडेट गरेको हुनाले, वाइफाइ आइकन शीर्ष पट्टीमा देखा पर्दैन, यद्यपि इन्टरनेटले काम गर्दछ तर आइकन देखा पर्दैन, र यदि मसँग g जी र वाइफाइ सक्रिय छ भने, प्रणालीले G जी प्रयोग गर्न रुचाउँदछ! ! त्यसैले मैले एकै दिनमा सबै डाटा खर्च गरें, कस्तो बिच।
अन्य समस्याहरू यो हो कि मसँग आईओएस since पछि ब्याट्री समस्याहरू छन् र यो झन् झन् खराब हुँदै जान्छ, मलाई थाहा छैन ब्याट्री परिवर्तन उत्तम हो कि होइन, तर १g जीबीको साथ मसँग लगभग it9जीबी एसई समात्नु राम्रो हुन्छ, नोट: जब आईओएस .16 ..64 बाहिर आयो म यसलाई ब्याकअप बिना कारखानाको रूपमा पुनःस्थापित गर्‍यो, मलाई अब आईफोनको लागि के गर्ने भनेर थाहा पाउनुपर्दैन।
मैले मेरो आईफोन ss + लाई आईओएस .6 .२.१ बाट आईओएस .9.2.1 ..9.3.1.१ मा अपडेट गरें र मैले याद गरे कि ब्याट्री छिटो उपभोग गर्दै थियो र मैले यसलाई नयाँको रूपमा कन्फिगर गरें र त्यसपछि मैले के गरे संस्करण .9.2.1 .२.१ मा डाउनलोड भएको छ सेबले यसलाई चिन्हबाट रोक्नु अघि 🙂
Chuy लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले आईफोन change परिवर्तन गर्नुपर्‍यो किनकि यसले नेटवर्क सेटिंग्स रिसेट गर्दा वाइफाइमा जडान हुन रोकेको थियो।
आईफोनले स losing्केत हराइरहेको थियो र मैले यसलाई पुनःसेट गर्नुपर्‍यो तर यो खराब थियो किनभने यो कहिलै फिर्ता आएको छैन।
मैले पुन: कनेक्ट गर्न सक्दो प्रयास गरें तर कुनै बाटो थिएन।
मैले यसलाई नयाँ आईफोनको रूपमा पनि पुनःस्थापित गरें तर केहि पनि होइन।
मैले यो प्रयोग नगरिएको बक्समा भण्डार गरेको छु।
यदि कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्दछ भने म यसको कदर गर्दछु, धन्यवाद।
शुभ प्रभात साथी
यसलाई ठीक गर्ने एक मात्र तरीका भनेको यसलाई एप्पल स्टोरमा लगेर हो, तिनीहरूले तपाईंको आईफोन जाँच गर्नेछन् र कुन भागले काम गरिरहेको छैन भनेर बताउँछ।
जब मेरो आईफोनले वाइफाइ समात्न रोक्न मैले यो गरें, र त्यस पार्टले मलाई २० यूरो मात्र खर्च गर्‍यो।
मलाई आशा छ यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ 😉
तपाईंले के टुक्रा बदल्नुभयो?
जोस लुइस क्विन्टाना जी (@ QuintanaGJL) भन्यो
म घण्टाको लागि वाइफाइ ठीक गर्ने प्रयास गर्दैछु, मैले पुनर्स्थापना गरें, हटाएँ, अपडेट गरियो र अन्तमा "Jairo Mc" तपाईको बुद्धिमानी सल्लाह पढ्दछु, मैले seconds सेकेन्डको लागि हेयर ड्रायर प्रयोग गरें र भोईला !!!! ... WIFI मा जडान भयो! !!!!!!
जोस लुइस क्विन्टाना जी (@ QuintanaGJL) लाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग आईफोन have छ र यसले वाइफाइसँग जोड्दैन ... के तपाई मलाई आफ्नो सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ?
तपाईंले ड्रायर कसरी प्रयोग गर्नुभयो?
मार्तीलाई जवाफ दिनुहोस्
SySy Xm (ySySyBooM) भन्यो
धेरै धेरै धन्यबाद ... ऊ निराश अवस्थामा पुगेको थियो। मैले प्रत्येक चरण अनुसरण गरे, अपडेट गरे र वाला समस्या समाधान भए। धन्यवाद
SySy Xm (@SySyBooM) लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई दर्साईएको सबै चरणहरू गरेँ।
मेरो आईफोन ()) को साथ समस्या यो हो कि यसले कुनै पनि वाइफाइ नेटवर्क दर्ता गर्दैन, चयन गर्न कुनै नेटवर्कहरू छैनन्; यो नेटवर्क समस्या होइन किनकि सेल फोनले मेरो घर, मेरो काम वा मेरो संकाय दर्ता गर्दैन।
मैले फोन रिस्टार्ट गर्न र नेटवर्क सेटिंग्स रिसेट गर्ने प्रयास गरें, र त्यसो भएन। मलाई अरू के गर्ने थाहा छैन।
मलाई मद्दत गर्न समान हुन्छ
नमस्ते, मसँग आईफोन have छ र सबै कुरा राम्रो हुँदै थियो, केहि दिन अघि म मेरो घर वाइफाइ नेटवर्कमा जडान गर्न सक्दिन, नेटवर्कको नाम उपकरणमा देखा पर्दछ, मैले दुबै राउटर पुनः सुरु गरेको छु, मोडेम र मेरो सेल फोन। म्याकबुक सहित मेरो घरमा सबै अन्य उपकरणहरू सामान्य रूपमा जडान हुन्छ, तर, जब म सेलफोन जडान पछि यो विच्छेदन जडान पछि कनेक्ट गर्दछ, माथिको वाईफाई आइकन नेटवर्क नेटवर्क सेटिंग्सको प्यानलमा जडान भएको भनेको भए पनि देखा पर्दैन। म के गर्न सक्छु?
सिल्भिया मार्चेट्टी भन्यो
haha अविश्वसनीय! लक बटनमा हेयर ड्रायरको बारेमा कुरा गर्नुहोस् (अगाडि गोल गोल) !!! अविश्वसनीय तर सत्य!
सिल्भिया मार्चेट्टीलाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो आईफ़ोन इंटरनेटमा सम्पर्क छ तर आईटी को लागी कुनै संकेत छैन, कृपया सहयोग गर्नुहोस्।
JAVIERA लाई जवाफ दिनुहोस्
मिगेल एंजेल ट्रजिलो क्रुज भन्यो
ब्लू सिग्नल नेटवर्कको नाम पछाडि देखा पर्दछ, त्यसपछि एक प्याडलॉक, त्यसपछि होर्इजन्टल कर्ब लाईन्स सिग्नल र त्यसपछि प्रशासन साइन इन सर्कलमा, तर स्क्रिनको माथिल्लो बायाँ कुनामा, तेर्सो घुमाविएको रेखाको संकेत देखा पर्दैन। जोडिएको; म के गरूँ?।
MIGUEL ANGEL TRUJILLO CRUZZ लाई जवाफ दिनुहोस्
केहि स्थानहरूमा म जडान गर्न सक्दछु र अन्यमा होइन, तिनीहरू सोच्छन् कि केहि मेरो सेल फोनमा वाइफाइको प्रश्नमा सर्दै छ।
हेलो, मसँग आईफोन 8 छ र यो घर वाईफ़ाईसँग जोड्दैन। मैले सबै कुरा सुरु गरेको छु र सामान्य सेटिंग्समा मैले नेटवर्क पुन: स्थापना गरेको छु र यो अझै नेटवर्कको लागि पर्खिरहेको छ।
म परामर्श गर्दछु, उनीहरूले मलाई आईफोन gave दिए, पुनःस्थापना गरियो, जब मलाई दिने मलाई केटीले फोन चिप्स गर्न थाल्दा वाइफाइ छनौट गर्ने विकल्प दिईन् भने उनको चिप राख्छ, तर जब म उनको चिप राख्छु, उनी मलाई एक वाइफाइको विकल्प दिदैन, र जब म यो फोन सिग्नल मार्फत गर्न चाहन्छु, यसले मलाई या त अनुमति दिँदैन, अर्थात, म यसलाई कन्फिगर गर्न पनि जारी राख्न सक्दिन, यदि तपाईं मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ I यसको कदर गर्छु, अभिवादन छ
जोसुé कार्बाजल। भन्यो
नमस्कार, के तपाई मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? मैले पहिले नै प्रत्येक "समाधानहरू" गरिसकें र अझै पनी यो जडान हुँदैन। म आईफोन कारखाना रिसेट र मेरो सामान र बूम बहाल गर्न कोशिस! जुन फेरि विच्छेद गर्दछ। यो वाइफाइ समस्या होइन किनकि मैले बिभिन्न चीजहरू प्रयास गरेको छु। मलाई सहयोग चाहियो। यो एक बर्ष पहिले भएको थिएन। यो आईफोन s एस हो।
जोसुé कार्बाजललाई जवाफ दिनुहोस्।
विल्बर लोपेज भन्यो
मैले पहिले नै नेटवर्क सेटिंग्स धेरै चोटि पुनःस्थापना गरें र अझै पनि वाइफाइ नेटवर्कमा प्रवेश गर्न सक्दिन
मसँग के अरु समाधान हुन सक्छ ...
Wilber López लाई जवाफ दिनुहोस्
शुभ प्रभात, मैले समस्या समाधान गरिसकें, वाइफाइ सिग्नल भने बाहिर निस्केन किनकि अभास्ट VPN ले यसलाई ब्लक गर्‍यो।
पोडकास्ट xx०7: १GB जीबी आईफोनका लागि जादू